Mayelana AOXJET Electrice Surfboard Inkampani
AOXJET Kuye okwenza kagesi ngamandla izinhlelo kusukela 2015. Ekuqaleni thina enikeziwe kagesi ngamandla izinhlelo brand ahlukahlukene zokufuna ukudala imikhiqizo yabo amanzi ezemidlalo. Lokhu kwasinika eziningi nesipiliyoni emkhakheni ngaphambi kokuba sinqume ukwedelela imikhiqizo yethu siqu amanzi ezemidlalo. Sakwazi ukuthatha zonke esasikufunde usifake imikhiqizo yethu ukumela inani kangcono ukusebenza.
Inethiwekhi yethu ejulile egxilile embonini amanzi ezemidlalo Lisenza sikwazi njalo ulwazi lokuqala kakhulu esandleni sanoma yimuphi imikhiqizo emisha kanye izitayela ezintsha. Njengoba ehamba phambili core ngamandla umphakeli, sinalo eduze kakhulu ukubambisana ubudlelwano nabanye amanzi emidlalweni eminingi imikhiqizo abakhiqizi futhi kuqala ukuthenga imikhiqizo yabo ngesikhathi ephansi okunokwenzeka izindleko. Zonke imikhiqizo thina ezisohlwini website, basuke noma ngeqholo ezivezwa AOXJET ekhiqizwa ozakwethu osendaweni akhethwe ngokwamanani, ukwabelana kufinyelelwe umgomo ofanayo eyisisekelo ekudaleni arcade futhi ukubheja value imikhiqizo amanzi ezemidlalo.
Yonke imikhiqizo AOXJET basuke noma wenza endlini by AOXJET, noma eyenziwe nabalingani bayo wokubambisana abasebenzisa ngamandla izinhlelo AOXJET sika. Lokhu kusinika intengo engcono akuzona kuphela, kodwa futhi engcono ukuze izinto eziza kuqala futhi flexibilities.
Esinokwethenjelwa Core Technology
Through iminyaka yethu ucwaningo nentuthuko, futhi ukuhlolwa imikhiqizo ehlukahlukene, ngamandla ethu izinhlelo phakathi izinhlelo iningi enokwethenjelwa ngezikhathi zokuhlupheka emhlabeni. Ikakhulukazi owethu ESC yakhelwe, uye ukuletha ngempumelelo phansi izinga okuyiphutha ukuba ngaphansi 0.5%, okuyinto ongaphakeme kakhulu ezemidlalo amanzi imikhiqizo kagesi.
Ngezifiso IBhodi Umumo / Brand
Ngenxa esiye sabhekana nazo we-house yokukhiqiza yamanzi imikhiqizo ezemidlalo kanye ibambisane nezinye izinkampani ezahlukene imishini amanzi, senze ngamandla ethu izinhlelo ukuba kuhlanganiswe kakhulu futhi angase kalula afakwe ku- ezahlukene bobunjwa ebhodini. Nge ubudlelwano kwethu kuphelile supply chain abaklami zezimboni, abenzi bemithi isikhunta, ukuze ibhodi igobolondo izimboni, kudingeka sivele umbono wakho noma imidwebo yakho ukuze usizo une siqu yakhelwe Electric Surfboard noma umzimba ibhodi yakho.
Zixhaswe Inani Sample
Singabantu namaphupho. Sifuna ukwenza amanzi ezemidlalo ukuba ethandwa kakhudlwana. Sifuna abantu abaningi ukuba babe ithuba ukujabulela fun of amanzi ethu imvelo umama enika. Sikholelwa ngakho wena. Sikholelwa ukuthi bonke amaphupho omkhulu Uyoba nesiqalo ethobekile, ngakho sifuna ukwenza isithiyo ukuba njengoba low ngangokunokwenzeka, zonke namaphupho abazimisele ukuba abantu abahilelekile kule ezemidlalo amanzi enkulu ekukhuthazeni isinyathelo. Reverse bendabuko zamanani scheme, sisuke kakhulu subsiding intengo wethu isampula ukwenza isampula ukuba kakhulu ezishibhile ukuze kuyoba lula ngawe ukuthola eyodwa futhi uyizame at ngelakho. I ezixhaswe intengo sampuli ngokuqinile kuphela ibhizinisi abathengi abahlela babe wabenza zethu / abasabalalisi. Ngakho kungenzeka idingeke imfundo inkampani emfushane ukuba unelungelo wentengo yethu ezixhaswe isampula. abathengi Siqu engathenga at retailing intengo.
Ucingo: +86 13058172496
Jet Electric Body Board Motor, Motorized Surfboard, Water Board With The Motor, Motor For Esurfing, Motor Surfboard, Surfboard Nge Motor ,